Paul Pogba oo dib ugu soo laabtay Tababarka Kooxda Man United kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras – Gool FM
(Manchester) 12 Sebt 2020. Paul Pogba ayaa dib ugu soo laabtay tababarka Kooxda kubadda cagta Manchester United kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras oo ku dhacay.
27-sano jirkaan khadka dhexe ayaa bishii la soo dhaafay laga helay Kofid 19, laakiin waxaa la soo warinayaa inuu dib ugu soo laabtay xerada Tababarka Carrington ka hor kulanka saaxiibtinnimo oo ay la leeyihiin maanta oo Sabti ah Aston Villa.
Labadaba Pogba iyo xaaskiisa Maria Zulay ayaa labaduba uu ku dhacay KoronaFayras, laakiin iyadu waxa ay shaaca ka qaaday inay caafimaad dareemayaan, waxaana ay ku soo qortay todobaadkii la soo dhaafay barteeda Instagram-ka: “Guriga ayaan ku qaadanaynaa xoogaa fiitamiin D ah, hadda waxaan dareemeynaa wax aad u wanaagsan.”
Saxiixa ku fadhiya 89-ka milyan oo gini ayaa seegay waajibaadka xulkiisa qaranka Faransiiska ee Nations League gaar ahaan guulihii ay ka gaareen Sweden iyo Croatia, waxaana uu ku maqnaa soo kabashada caabuqan.
Lama garanayo haddii Pogba uu ka mid noqon doono xiddigaha u safraya Villa Park halkaasoo ay Aston Villa kula soo ciyaarayaan kulan saaxiibtinimo oo ka mid ah kuwa ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka.
Pogba ayaan weli heshiis cusub u saxiixin Red Devils, waxaana qandaraaskiisa haatan uu ku eg yahay xagaaga soo socda, inkastoo uu qiyaar u haysto in sanad kale lagu kordhin karo heshiiskiisa.
Miralem Pjanic oo farriin u soo diray Taageerayaasha Kooxdiisa cusub ee Barcelona... (Muxuu yiri?)